Elfen Lied | Peace site
October 30, 2021 peacesite7410	1 Comment
Diclonius လို့ခေါ်တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ကနေကွဲပြားနေတဲ့ ဗီဇတစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီမျိုးရိုးဗီဇနဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေရဲ့ခေါင်းမှာ ချိုနှစ်ခုပါတယ်။ သူတို့က ရက်စက်တယ် လူစိတ်မရှိဘူး သတ်ဖြတ်ရတာကိုကြိုက်ပီးတော့ လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ သုတေသနပညာရှင်တစ်စုက သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ အဲ့အတွက် Diclonius တွေကိုပိတ်လှောင်ထားကြတယ်။ တကယ်ရော Diclonius တွေက သူတို့ထင်သလိုမျိုးလား?
ပထမအပိုင်းမှာပဲ Lucy လို့ခေါ်တဲ့ Diclonius ကလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ လူသားဖြစ်တဲ့ Kohta ဆိုတဲ့ကောင်လေးရယ်၊ သူ့ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းမလေး Mayu တို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲ? Kohta ရဲ့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ အတိတ်မှာရော ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ? Diclonius ဗီဇတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိနေလဲ? ဆိုတာတွေကို ဗဟေဠိဆန်စွာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်နိုင်မယ့် Anime ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါ။
Episode 1 (StreamSb) (Dubox)
Episode2(StreamSb) (Dubox)
Episode3(StreamSb) (Dubox)
Episode4(StreamSb) (Dubox)
Episode5(StreamSb) (Dubox)
Episode6(StreamSb) (Dubox)
Episode7(StreamSb) (Dubox)
Episode 8 (StreamSb) (Dubox)
Episode9(StreamSb) (Dubox)
Episode 10 (StreamSb) (Dubox)
Episode 11 (StreamSb) (Dubox)
Episode 12 (StreamSb) (Dubox)
Episode 13 END (StreamSb) (Dubox)
Previous PostParanormal ActivityNext PostGentlemen Prefer Blondes (1953)
One thought on “Elfen Lied”